Ny trano fandraisam-bahiny amin'ny tranokala Korinto dia hanokatra Grand Hotel du Boulevard manan-tantara any Bucharest, Romania
Home » Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny » Ny trano fandraisam-bahiny amin'ny tranokala Korinto dia hanokatra Grand Hotel du Boulevard manan-tantara any Bucharest, Romania
Ny trano fandraisam-bahiny amin'ny trano fivahinianana trano any Korinia dia vonona hanitatra ny portfolio-hotely misy kintana dimy miaraka amin'ny fanokafana trano mihaja vaovao any Bucharest, Romania. Ao afovoan-drenivohitra, ny Grand Hotel du Boulevard teo aloha dia hanokatra ny varavarany indray amin'ny 1 Desambra 2019, hifanandrify amin'ny Fetim-pirenena any Romania.
Niorina tamin'ny 1867, ny trano voatanisa dia nampiasaina farany ho hotely efa folo taona lasa izay ary izao dia hanamboatra fanavaozana be dia be mba hipetraka mifanaraka amin'ny fenitry ny sonian'ny haitraitra sy ny lamaody mifandraika amin'ny Korinto.
Manolotra efitrano sy efitrano 50 mahery, safidy fisakafoanana mahafinaritra, efi-trano fidiovana iray, efitrano fivoriana fivarotana bizina, ary kojakoja lafo vidy i Korintiana Grand Hotel du Boulevard Bucharest.
Ny hotely dia manaraka ny fomban-drazana any Korinto amin'ny famerenana amin'ny laoniny ireo hotely lehibe taonjato faha-19 manerana an'i Eropa. Ilay trano fandraisam-bahiny tany Korinto Hotel London, Korinto Hotel Budapest, ilay Grand Hotel Royal teo aloha, ary Korinto Hotel St Petersburg, Rosia, dia fananana mariky ny taonjato faha-19 izay nohajaina, nohavaozina ary natombok'ireo trano fandraisam-bahiny Corsias. Tany Bruxelles, ny Grand Hotel Astoria teo aloha dia azo tamin'ny 2016 ary eo am-panatanterahana ny asa ankehitriny mba hanovana ny fananana hiverina amin'ny famirapiratany voalohany.
Any Bucharest, ny andraikitry ny trano fandraisam-bahiny amin'ny trano fandraisam-bahiny ao amin'ny trano fandraisam-bahiny dia natao tamin'ny 5 martsa 2018, miaraka amin'ny orinasa NIRO Investment Group.
QP Management, orinasa rahavavy ao amin'ny vondrona Hotels Hotels, dia hanohana ireo mpamorona amin'ny alàlan'ny fitantanana tetikasa sy ny serivisy fitantanana ny vidiny. Ny asa amin'ny fanavaozana dia antenaina hanomboka amin'ny Q2 2018.
Ny fifanakalozana dia nanoro hevitra an'i Beaufort Global, orinasam-pandraharahana mitantana, fampandrosoana ary fitantanana fananana miorina ao Dubai, UAE.
Amin'ny 10 Mey 2018, ireo mpandray anjara manan-danja avy amin'ny Hotels Hotels any Korinia, NIRO Investment Group, ary ny Beaufort Global Partners, ary koa ireo vahiny mendri-kaja, dia hiangona ao amin'ny fankalazana ny lanonana fanaovan-tsonia an'i Hotelia Grand Hotel du Boulevard. Ny datin'ny hetsika, ny Andron'ny mpanjaka romanianina, dia voafantina manokana ho an'ny tantara sy ny kolontsaina manan-danja amin'ny vahoaka romanianina. Bebe kokoa momba ny trano fandraisam-bahiny any Bucharest: https://www.hotelsinbucharest.net/
Efa ela no azo ekena, tsy ara-dalàna izao: Travel & fizahan-tany eo amin'ny laharana voalohany amin'ny varotra bibidia tsy ara-dalàna
Hilton Salalah Resort no nahazo mari-pahaizana Green Globe Certification voalohany